Mayelana nathi - China Beihai fiberglass Co., Ltd.
I-China Beihai Fiberglass Co., Ltd. inezimboni ezintathu ezinabasebenzi abangama-2100 ezikhethekile ekukhiqizeni imikhiqizo ye-fiberglass eChina.Sikhiqiza i-E-Glass ne-S-Glass fiberglass ezulazulayo, imicu eqoshiwe, umata oqhubekayo, umata we-combo othungiwe, indwangu ye-multiaxial, i-powder kanye emulsion oqoshiwe umucu uhlaka, nokwelukiweyo ezihambayo, izicubu mat kanye zu (fiberglass kwagcizelela plastic) imikhiqizo efana zu umnyango, zu imbali imbiza, zu ebaziwe njll
Ikakhulukazi, i-China Beihai inabanikazi bobuchwepheshe bamakheli we-word-class core wezindawo ezinkulu ze-E-Glass fiber kanye nolayini abathathu bokukhiqiza (ububanzi be-1600mm, 2600mm no-3200mm) wokukhiqiza i-fiberglass eqoshiwe umucu womshini kanye nezinto zokusebenza zokweluka ezi-120 zokukhiqiza i-fiberglass ephothiwe.
Umphumela waminyaka yonke we-fiberglass roving ufinyelela kumathani ayi-380,000 kanye ne-fiberglass eqoshiwe umucu womshini ongamathani angama-66,000 kanye ne-fiberglass elukiwe ehamba ngamathani angama-33,000.
1.3 amafemu anezisebenzi ezingama-2100 ezikhethekile ekukhiqizeni imikhiqizo ye-fiberglass.
Okungaphezu kweminyaka engu-10 'ngezigaba zomkhiqizo ezingaphezu kuka-18 ezinganikeza ngezinsizakalo zokuma okukodwa.
Imigqa yokukhiqiza engu-3.3 nemishini yokwaluka eyi-120 enikeza ukukhiqiza okuzinzile ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi futhi ngokushesha.
Yonke imikhiqizo yethu enamazinga ekhwalithi aphesheya, imikhiqizo ithunyelwa eSoutheast Asia, Mid East, Eastern Europe, South America, North America kanye nezinye izimakethe ezinkulu zaphesheya kwezilwandle.
Ithimba le-5.R & D nezobuchwepheshe obuphambili ukuze unikeze ngempumelelo zonke izinhlobo zemikhiqizo ejwayelekile nemikhiqizo eyenziwe ngezifiso.
6.Sineminyango ekhethekile esezingeni ukuqinisekisa ukuthi ayikho inkinga esezingeni ngaphambi kokulethwa.
7. Ukuthunyelwa kwamanye amazwe cishe sekuyiminyaka eyishumi yomlando, kunqwabelene nokuhlangenwe nakho okucebile futhi kujwayelene nesitifiketi sedokhumentari nenqubo yokuthumela okukunikeza izinsizakalo zokuthekelisa zobuchwepheshe.
Ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende ngezindlela zokukhokha eziguqukayo nezinhlobonhlobo. Njenge-L / C, T / T, inyunyana yaseNtshonalanga, i-paypal, njll.
Ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa kwe-inthanethi kwehora elingu-9.24 nangemuva kokuthengisa ukukunikeza impendulo efanele futhi efike ngesikhathi.